Kowda Luulyo--Happy Independence Day - Page 17 - General - Somali Forum - Somalia Online
Cape Town, Koonfur Afrika 2012:
Hees cusub 2012 ee ku saabsan Kowda Luulyo:
VIDEO: July 1, 2012 - Maalintii Midnimada Qaranka Soomaaliya - Buhoodle, KHaatumo State Of Somalia
Daawo Sida Qiimaha Iyo Quruxda Badan Ee 1july Oo Ku Aadan Maalinta Xornimada Umada Somaliyeed Qaadatay Sidii Looga Xusey Maamul Goboleedka KHaatumo Of SOmalia (Daawo Sawiro+Warbixin Koban)
July 1, 2012 - Maalintii Midnimada Qaranka Soomaaliya - Buhoodle, KHaatumo State Of Somalia
http://youtu.be/vXzUhth-a6g" frameborder="0" allowfullscreen>
VIDEO:Munaasibad 1 Luulyo, KHudbadii MadaxWeynaha KHaatumo State, Iyo Ciyaarihii Kubada Cagta ee Darwiish, Hilaal, & TogSol
Maamul-Goboleedka KHaatumo State oo Si Wayn Looga Xusay Munaasabadda 1-da Luulyo Iyo Madaxda Maamulka Khaatumo oo Shacabka KHaatumo State Dabaal Daga Kala Qayb Galay
Odense, Denmark 2012:
Maalinta Xornimada ee 1-da Luulyo oo si balaaran maanta looga xusay magaalada Odense ee Dalka Denmark
Dhamaan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa waxay u dabaaldageen Maalinta Xornimada ee Jamhuuriyada Soomaaliya, taas oo ka soo wareegtay sanadguuradii 52-aad, halkaas oo ay isugu soo baxeen dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Odense ee dalka Denmark,Dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada odense ayaa halkaas waxa ay ku muujiyeen dhoolatus iyo gaada ka ciyaar aad loola riyaaqay kuna soo beegantay xili ay nabaddeynta dalka Soomaaliya si dardar leh ay ku socoto.
Odoyaasha Dhaqanka Gudoonka Jaaliyada Soomaaliyeed, Ganacsatada, Culumaa’udiinka, Hooyooyinka, Dhalinyarada ayaa dhamaantood ka soo qeyb galay maanta munaasabaddan lagu maamuusayay maalinta xornimada oo ka dhacday Hoolka wayn ee Vollsmose Torv Center. Nabadoon Xasan Barre Qaasim oo kamid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee magaalada Odense ayaa hadal uu ka yiri xaflada maalinta xornimada ku tilmaamay midnimo iyo iskuduubni dareenka ay maalintan u lee dahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
“Waa maalin aad ugu weyn qalbiga ummada Soomaaliyeed oo ay ku xasuustaan geesiyaashii u soo halgamay xornimadda, unna huray dalka Naftooda iyo maalkooda, waxaana ka mid ah Dhalinyaradii SYL iyo halgameyaashii suuragaliyay midnimadii iyo sameynta jamhuuriyad hal calan leh” ayuu yiri Nabadoon Xasan Barre Qaasim.” Nabadoon Xasan Barre Qaasim wuxuu intaas ku daray, “Geesiyaashu waa ay badan yihiin, waxaana kamid ah dhalinyarada maanta soo abaabushay xafladan lagu xusayo maalinta xornimada Soomaaliyeed ee aanu dhamaanteen isugu nimid, waxaa annoo ku hadlaya magaceeyga iyo kan Jaaliyadaba u mahadnaqayaa Dhalinyarada magaalada Odense oo aan oran karo waxa ay ku socdaan wadadi SYL. Maalinta Xornimada 1-da Luulyo ayaa waxaa si buuxda maanta looga xusay magaalada Odense iyo meelo kale oo badan oo ay isugu soo baxeen dhamaan intii lahayd damiir Soomaalinimo iyagoo sitay Calanka Soomaaliyeed.
Sanadguurada 52 aad ee xornimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2012 waxay ku soo beegantay xili ay Soomaaliya ka soo kabsaneyso qaskii iyo dowlad-la’aantii ka jirtay mudo dhan 21 sanadood. Si kataba ha ahaatee, Jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Odense oo ay codkooda ku hadlayaan Nabadoon Xuseen Barre Qaasim, dhamaan Gudiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo abaabulay Xuska 1-da Luulyo,Ganacsatada, Culumaa’udiinka iyo Hooyooyinka, waxay hambalyo u dirayaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, iyagoo u rajeynaya Nabad, Farxad iyo Guul waarta. Waa markii labaad oo magaaladda Odense ee dalka Denmark si aan horey loo arag looga xuso maalinta 1-da Luulyo oo ay dad badan ka soo qeyb galeen iyagoo sita Calanka Soomaaliyeed.
Waxay arintan cadeyn u tahay isbadalka iyo jawiga horumarka leh ee dadka Soomaaliyeed gaareen, taas oo aan suuragali laheyn hadii aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Odense ay si wadajir ah ugga shaqeen qabsoomida xuska 1-da Luulyo.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Odense ayaa waxaa ka go’an dadaalka ay ku doonayaan in ay ku horumariyaan Jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Odense taa oo ay horay u balan qaadeen inay geed dheer iyo mid gaabanba u fuuli doonaan.
July 1, 2012 - Maalintii Midnimada Qaranka Soomaaliya - Caasimada Taleex, KHaatumo State Of Somalia
Xaflada Munaasbada 52- Guuradii Xornimada Iyo Midowga Sooaamliya Ayaa Ka Socota Caasimada Taariikhiga Ah Taleex Iyo Khudbadii Madaxweynaha KHaatumo State Axmed Cilmi Cisman
Xafladan oo ay soo qabanqaabiyeen Masuuliyiinta Maamulka khaatumo iyo Ururada Bulshada rayidka ah ayaa xalay ka socota Xarunta Madaxtooyada Maamulka Khaatumo ee Taleex, hadaba Xafladan qabkamida ladaawo qaybah dhima waxan idiin soo gudbiin doona hadii lahay iidmo waqtiyada soo socda
Ankara, Turkiga 2012:
Magaalada Ankara Ee Dalka Turkiga & Munaasabada Qiimaha Badan ee 1-Luulyo
Munaasabad si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay looguna dabaal degayay 1-da Luulyo 52-guuradii ka soo wareegatay markii Gobolada Koofureed xornimada ka qaateen Gumeystihii Talyaaniga iyo midowgii Gobolada Koofur iyo Waqooyi ayaa xalay waxaa lagu Qbatey Magaalada Ankara Ee Dalka turiga taas oo ay qaban qaabadeedu laheyd Safaarda Soomaalida ee Dalkaasi.
Munaasabadaan lagu weyneynayey 1-da Luuliyo ayaa waxaa si taariikhi ah uga wada Hadley Amb.Maxamed Mursal Sheekh oo ah Safiirka Safaarada Soomaalida Turkiya, xoghayaha Koowaad ee Safaaradaasi Mudane C/qaadir Maxamed Nuur iyo Madaxkale oo isugu jirey Diplamaasiyiin, waxgarad siyaasiyiin, Ardey oo ay ka dhax muuqdeen Haween si aad ah ugu soo lebistey Dharka hidaha iyo Dhaqanka Astaanta Soomaalida u ah.
Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay Amb. Maxamed Mursal wuxuu ku dheeraadey Taariikhdii Gumeysiga iyo marxaladihii kala duwanaa ee dalka soomarey. Safiirka oo Khudbadiisa aad udheereed ayaa wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada 1luuliyo isagoona tilmaamay in shacabka looga baahan yahay in ay ku dadaalaan si dalka nabad waarta logu soo celin lahaa kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibada jooga intuba, amaan aan lasoo koobi karin ayaa wuxuu udirey shacbiga iyo dowlada Turki oo garab istaagey dadka soomaaliyeed.
Sidoo kale Xoghayaha koowaad ee Safaarda Tukiya Mudane C/qaadir Maxamed Nuur ayaa amaan iyo bogaadinba ujeediyey Dowlada Turkiga oo Howlo aad u wanaagsan ka wada dalka soomaaliya ayadoo dib usoo nooleysey Rajadii iyo karaamadii ay lahaan jirtey Umada soomaaliyeed.
Hillary Clinton Oo Ugu Hambalyeysay shacabka Soomaaliyeed Maalinta sanadguuradii 52 Ee Xoriyada Gobolada koonfureed iyo Iaku darsanka Gobolada Waqooyi
Xog-hayaha arimaha debada ee dalka maraykanka haweeneyda lagu magacaabo Hillary Clinton aya waxay hambalyo ku aadan 1-luulyo ay udirtay dhamaan umada soomaliyeed,kuwaasi oo manta udabaal degaya sanad guuradii 52-aad.
Hillary Clinton oo wakiil ka ah madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo shacabka dalkaas ayaa hambalyadaas ku aadisay xilli inta badan ummadda Soomaaliyeed ay u dabaal-degayaan maalinta xorriyadda ee 1-da Luulyo, iyadoo xustay in sanadihii la soo dhaafay Soomaaliya laga sameeyay horumar dhinaca ammaanka ah.
Mrs Clinton ayaa xustay in dowladda KMG ah iyo maamul goboleedyada ay la dagaallameen dhibaatooyinka ka jiray Soomaaliya oo ay keeneen abaaraha, macluusha iyo colaadaha ay sababeen maleeshiyada al-Shabaab oo ay sheegtay in laga sifeeyay inta badan deegaannada ku dhow dhow Muqdisho.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka oo warkan saxaafadda siisay ayaa tilmaamtay in horumar buuxa laga gaaray sidii loo soo afjari lahaa waqtiga kumeel gaarka ah ee dowladda Soomaaliya ay ku sifeysay in siyaasad furfuran lagu wajahay arrimahaas.
Dhanka kale, Hillary Clinton ayaa u mahadcelisay deddaallada xooggan ee nabad ku soo dabaalidda oo ay sameeyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM oo dhammaantood howllo muuqda ka fuliyay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Waxay intaas raacisay in magaalada Muqdisho iyo deegaannada ku hareersan ay yihiin kuwo ka madaxbannaan maleeshiyada al-Shabaab.
Mrs. Hillary Clinton ayaa sheegtay in ay mar walba garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay garab ku siinayaan soo afjaridda xilliga kumeel gaarka ah iyo soo celinta xasilloonida, iyadoo u rajeysay Soomaalida nabad iyo horumar.